Kedu otu m ga - esi rite uru site na njikarịcha weebụsaịtị?
SEO (njikarịcha search engine) bụ ụzọ dị irè iji mee ka ebe nrụọrụ weebụ dị na SERP. Usoro mgbagwoju anya nke ntaneti na ntanetị na saịtị na-enyere ndị nwe ụlọ aka ịkwado elu na Google, Bing, Yahoo, na ndị ọzọ na-achọpụta engines. Ịdị elu ị na-agbaso, otú ahụ ka ị na-enwetawanye okporo ụzọ. Ụzọ nke ọma pụtara ịgbanarị na ahịa. Onye ọrụ nlekọta kachasị mma na-arụ ọrụ na saịtị gị, ohere a ka onye ọrụ a ga-eme ka ị ghọọ onye na-akwụ ụgwọ. Ya mere, site n'inweta njikarịcha njikwa search engine weebụ, ị na-enye ndị ahịa gị uru, ha na ha na-enyekwa gị uru. A njirimara njikwa kachasị mma na-agụnye ndị na-eme nchọpụta ahịa, nyocha nke ederede, nhọrọ nchịkọta nhọrọ dị mma, ntanetịkụm nke ọma na njikọta ihe ọṅụṅụ. A na-eme usoro a niile iji mee ka ndị ahịa nwere ike ịchọta ebe nrụọrụ weebụ gị n'etiti ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ ndị nwere niche. Dị ka data ndekọ data, ihe dị ka pasent 90 nke ndị ọrụ jiri njikọ dị na ibe SERP mbụ dịka ha chere na ngalaba ndị a dị mkpa karịa ajụjụ ha ma nwee ọkwa dị elu.Ma ha ziri ezi. Dị ka Google algọridim, naanị elu-uru na ebe nrụọrụ weebụ a ma ama kwesiri ịnọ n'ọnọdụ mbụ na peeji nke rụpụtara. Ya mere, ka anyị tụlee ihe ọrụ kachasị mma nwere ike imeziwanye ebe anyị na-edebe ihe n'Ịntanet ma nweta ebe nrụọrụ weebụ anyị gaa n'ọkwá Google.
Ọrụ ntanetịime saịtị
Nyocha mkparịta ụka
Iji wuo mkpọsa SEO na-emeri , ị ga-achọ ịma otú ndị asọmpi gị si etolite na azụmahịa ha. Ị kwesịrị ịmara ihe ụlọ ọrụ ndị dị n'ahịa gị na-achọpụta otu mkpụrụokwu ahụ ma rute ndị ahịa gị. Ọzọkwa, ị ga-achọ ịma ụzọ nyocha kachasị mma ha ji eme ihe ka mma. Ọ bụ ohere magburu onwe ya maka ịkọwa ụfọdụ usoro bara uru maka mgbasa ozi nkwado gị. Ị ga-enyocha isi ike na ike nke ndị asọmpi gị iji mara otú ị ga-esi merie ha.
Ọrụ ọzọ kachasị mma mkpokọta weebụ bụ nchọpụta isiokwu. Ọ bụ isi nke mgbasa ozi kachasị mma nke na-eduzi nzọụkwụ gị niile. Iji wuo mgbasa ozi SEO ga-emeri ma lelee ndị ahịa gị, ị ga-achọpụta ndị ọrụ ọchụchọ dị mkpa iji mee ihe mgbe ị na-achọ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị.Ọ bụrụ na ị na-eme nchọpụta nke isiokwu, ị ga-enwe ike ịmepụta nlọghachi dị elu na ego. Jide n'aka na isiokwu gị abụghị oke asọmpi na ogologo ọdụ iji nwee ike ịsọ mpi egwuregwu SEO ogologo oge.
Njikọ njikọ bụ akụkụ dị mkpa nke njikarịcha na saịtị. Ọnụ ọgụgụ nke isi mmalite ndị na-ezo aka na saịtị gị na-ekpebi ikike na aha ya. Ikwesiri ịdọta mma njikọ iji melite ebe nrụọrụ weebụ gị. Jide n'aka na ị na-etinye njikọ gị na ihe dị mkpa na nke metụtara ngalaba niche gị. Ọzọkwa, ịkwesịrị ịgụnye njikọ dị iche iche na-emetụta ọdịnaya iji mee ka ndị ọrụ na-akpali mmasị soro saịtị gị maka ama ndị ọzọ. Udo ụlọ na njikọ ndị dị mkpa site na weebụsaịtị ndị ọzọ bụ usoro oge na-eweta oge na mgbagwoju anya nke chọrọ mgbalị na ndidi Source .